Gu’yaal badan iyo guurka Maandeeq W/Q: Cabdifitaax Maxamed Xaambe | Laashin iyo Hal-abuur
Gu’yaal badan iyo guurka Maandeeq W/Q: Cabdifitaax Maxamed Xaambe
Gu’yaal badan iyo guurka maandeeq.
Maandeeq waxay hanaqaaday 1960kii, waxayna la aqal gashay ninkii ugu horreeyey ee gabar-nimo ku helay, maadama ay gabar ugub ahayd aadbaa loo soo dhaweeyey aqal-galkeedii, wuxuuna ahaa guur loo soo maray habdhaqankii saxda ahaa waana la soo doonay, lana gudoon siiyey ninkii loo arkayey inuu ahaa kii ugu mudnaa intii u xusul duubaysay in ay hantiso.Inkastoo mudanahaasi ahaa kii ugu horReeyey laakin ma noqon kii ugu dambeeyey!
Wixii intaas ka dambeeyey Maandeeq waxay gashay oo guursaday dhowr nin oo midba waddo u soo maray guurkeedii, qaarbaa jajuub ama qasab ku guri-gaystay, qaarbaa qarash iyo qarda jeex kale u soo maray in mar uun meher ugu dhaco, hayeeshee midna ma noqon guurkiisa mid waaraa oo lagu nagaado.
Maandeeq oo muunad, meeqaaan, muuq, qurux, qaayo, qalanjanimo kulansatay laakin nasiibkeeda guur xumaaday ayaa noqotey mid nin walba u hanqal taago ama hammiyo mar uun inuu hoy gaysto!
Rag badan ayaa u soo xayt-xaytay oo xodxodasho u galay in ay xillo u noqoto, qaarkoodna hadda ka hor ayaa horey calaf u kala direy oo marbeey minanka u joogtay kumasa nagaan gacantooda.Maandeeq ayadu mar walba oo ay quus ku dhawaato ayna niyad jab ka dareento guurka dhanba waxay daarataa oo ay nafta ku dajisaa heestaa tiraa;
Caashaq lagu hungoobiyo
Nin xuni ciilkuu ku baday
Ragba ha uga caagine
Cidlo nolosha kellinimo
Caku kuuma qalantee
Nasiibkaa markale cugo.
Maandeeq mar kale inay calafkeeda tijaabiso, ayey caqliga galisay, waxaana helitaankeeda isku garbiyey calafdoon badan, mid walibana siduu uu isaga iibi lahaa ayuu ku dhaqaaqey,kuwa badan ayaa yiri:
Kuu diir naxdaa
Dumar laga xushaa
Dahab iyo xariir
Dusha loo suraaa!
Maandeeq oo aad moodo wax dan ah inaysan ka lahayn nin lacag ku tookhaya ayaa cod dheer ku tiri:
Doqon maaha liitaa
Dirac maaha kii ladan
Maaha dahab iyo lacagoo
kalgaceylku waa dookh.
Ugu dambeyn Maandeeq waxaa calfaday mid ka mid raggii jaceylka daran u hayey hanashadeeda howl badan iyo waqtina ku bixiyey helisteeda, waa loo hooy-geeyey, waa loo mashxaraday loo heesay loo hambalyeeyey loona hanweynyahay inuu noqdo mid guurkiisa lagu gamashiyo,waxaa loo daaray heesta ah:
waa aroos waa aroos
la ilmee jiraaa
Aqal jaceyl iyo
Mar haddii Maandeeq galbatay ayaa mid ka mid ah calaf doonayaashii wuxuu yiri;
Misna geed ku kala xirey
Maxaa samirka gaaxda
Nasiib gaabiya dilay
Misna gaari waayaa.
Geeriyaad maku ambadaye.?
Mid kale ayaa asna yiri isaga oo guuldaradiisa la cataabaya
Ma qadarin Ilaaheey
Calaf inaan wadaagnee
Oori kaad u noqotaaan
Leeyahay dhib iyo oon
Uma qalanto hadimeee
Ka ilaali lahashada.
Midbaa si laxaw ku beeranyahay kula dar-daarmay ninkii gudoontey ee la gadoomey guurka iyo gacanta maandeeq.
Wiilkaan calafku sooree
Cesha suuban helayoo
Wuxuu mowle kugu simay
Haldhaa sama u dhalatoo
Sunne lagu anqariyeee
Sida loo bar-baarshaa
kuugu filan sareedee
Sayid noqo ilaashada
Sida weli karaameee
Sida sebi sabaalee
Sida hooyo wax u siii
Sida hoobal ugu hees
ragba kaga sarayniye
Sida Boqorad maamuus.
Qaar ma quusta yaal ah oo weli damac kaga jiro in ay Maandeeq mar uun heli doonaan ayaa ku luuqeeyey:
Wallee ama go’oo
Godka ciil la galay
ama gu’ga xigaaan
Ayadoo gamba leh
garoob-nimo ku heli
Maandeeq waagii hore ninka karti iyo ragganimo meel isu taagaa u hanqaltaagi jirey, haddase waa hortaa bannaan oo nin walbaa haweystay, taasoo hoos u dhigtay hammigii laga qabay guur heer gaara iyo reer horumara oo Maandeeq u hirgala.Maandeeq mar qudha ayay asay qaaday, inta kale xuurtaa lagu haystay oo guur xeeladaysan iyo mid xoog ahba aragtay, qaarbaa xitaa qudba sire ku qabay.Maandeeq maanta waxay u bugtaa in aysan mar dambe nin dambe inaysan xoog, xeelad iyo xoolo midna ugu guri gelin ee talo wadareed dadkeeda oo dhammi ka mideysan yahay ay ku guursato kuna guri gasho guulna laga gaaro.